China Mass Production 110g 18x14mesh mesh window for mveliso mveliso kunye nabathengisi | Yuniu
110g 18x14mesh umnatha window olukiweyo fiberglass eyodwa PVC camera, emva unyango ubushushu, umnatha icacile kwaye uzinzile, kwaye amandla elungileyo umoya kunye transparency.Fiberglass window Screen yenza izinto ezifanelekileyo kwizakhiwo mveliso kunye nezolimo ukugcina kude impukane, iingcongconi kunye nezinambuzane ezincinci okanye ngenjongo yokungenisa umoya.
Ubungakanani beMesh (mm)
Ububanzi (mm) Ubude beLoll (mm) Umbala
30, 45, 60, 75, 90, 110, 145, 160 4 * 4, 5 * 5 I-1000 njengesiqhelo 50, 100, 200 mhlophe, luhlaza, tyheli, orenji, Luhlaza
Ifayibha yeglasi yefestile:
1) Umqobo osebenzayo wokuthintela izinambuzane.
2) Ukulungiswa ngokulula kunye nokususwa, umthunzi welanga, ubungqina be-UV.
3) Ukucoceka okulula, akukho vumba, kulungile empilweni.
4) I-mesh iyunifomu, akukho migca eqaqambileyo kuluhlu lonke.
5) Chukumisa uthambile, akukho kungqubeka emva kokusonga.
6) umlilo enganyangekiyo, elungileyo uqine, ubomi obude.
esetyenziswa kwizakhiwo zeofisi ezikumgangatho ophezulu, indawo yokuhlala kunye nezakhiwo ezahlukileyo, iifama zemfuyo, iigadi, njalo njalo. Yeyona mveliso yokukhusela izinambuzane, iingcongconi kunye neempukane.
Ixesha lokuhambisa 15-20days emva kokufumana idiphozithi.
Sebenzisa iimveliso zokubambisa ngocingo lwezinambuzane zisetyenziswa kakhulu kwiminyango nakwiifestile zezakhiwo ezahlukeneyo ngokuchasene neengcongconi, izinambuzane kwanokwahlukana
Ukupakisha ipakethi yeplastiki, ii-2/4/6/8 rolls kwibhokisi enye yebhokisi, emva koko itreyi (ngokuzithandela)
Eminye imiqathango Samkela UKWENZIWA KWAKHO. I-OEM ngamandla ethu. (Uphawu, umbala, ukupakisha, njl) ilogo
Okulandelayo: Iteyiphu ye-fiberglass yokuncamathela
1200Tex 2400Tex Fibreglass ngqo Ukuhamba C ...